တက္ကသိုလ်တိုးတက်မှု» Hodges တက္ကသိုလ်
တက္ကသိုလ်တိုးတက်မှုဌာန၏အခန်းကဏ္ students သည်ကျောင်းသားများအားသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်လူထုကြိုးပမ်းမှုများတွင်ပိုမိုမြင့်မားသောသင်ကြားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်ပြင်ဆင်သည့်ကျောင်း၏မစ်ရှင်ကိုထောက်ပံ့ရာတွင်ကျောင်းသားဟောင်းများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်ရပ်ရွာလူထုများနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။ Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်ဆက်နွယ်သူများကဤကျောင်းသည်တမူထူးခြားသည်ကိုနားလည်သည် ၄ င်းသည်အကျိုးစီးပွားအမျိုးမျိုးနှင့်အလုပ်အကိုင်အမျိုးမျိုးရှိသောတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ပြည့်နှက်နေသောအံ့သြဖွယ်ကွဲပြားခြားနားသောအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မဲဆန္ဒနယ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုသည့်တူညီသည့်အချက်တစ်ခုမှာကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနှင့်ကြီးစွာသောအရာများကိုပြီးမြောက်ရန်၊ ရှေ့သို့တိုးတက်ရန်နှင့်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်၊ သူတို့မိသားစုနှင့်ရပ်ရွာလူထုအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုဖန်တီးရန်ဆန္ဒဖြစ်သည်။
သင် Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်ချိတ်ဆက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်စစ်မှန်သော grit ကိုလက်ခံသောခေါင်းဆောင်တစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းအမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘွဲ့ရ ၆၀၀၀ ကျော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာသောကော်ပိုရိတ်ပညာရေးဆိုင်ရာမဟာမိတ်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ B6,000B ဆက်သွယ်မှုများဖြင့်ဘွဲ့ရပြီးနောက်သို့မဟုတ်ရပ်ရွာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး အနေဖြင့်သင့်အားကောင်းမွန်စွာအစေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့ကတိပြုထားပါသည်။ Hodges တက္ကသိုလ်နှင့်သင်၏ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အရေးပါသည် မင်းတို့ဆီကကြားချင်တယ်.
သင်၏အတွေ့အကြုံ၊ ကျောင်းသားတစ် ဦး အနေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သူငယ်ချင်းဖြစ်စေဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုနှင့်တိုးတက်မှုကြိုးပမ်းမှုများအတွက်အဖိုးတန်သည်။ ယခုသင်လုပ်နေသည့်အရာနှင့်သင်မြင်တွေ့ရသည့်နည်းလမ်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအမြဲတမ်းမွမ်းမံပေးပါ Hodges တက္ကသိုလ် သင်၏ကမ္ဘာကြီးတွင်ယင်း၏အခန်းကဏ္ကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်းသည်မကြာခဏလာရောက်လည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Hodges တက္ကသိုလ်မှကူညီသူတစ် ဦး ကသူတို့၏လက်ဆောင်သည်နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုစိတ်ထဲထားရှိရန်ဖြစ်သည်ကိုနားလည်သည်။ ၄ င်းတို့သည်မိမိတို့ဘဝ၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်စုံစေရန်အတွက်အရေးအကြီးဆုံးအချိန်တွင်တစ် ဦး ချင်းအားလိုအပ်သောအထောက်အပံ့များကိုပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ရည်မှန်းချက်မှာသူတို့၏ဘ ၀ များနှင့်ရပ်ရွာလူထုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်တည်ဆောက်ရန်အုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ ပညာရေးသည်ဘဝကိုပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးပြောင်းလဲမှုသည်စျေးပေါခြင်းမဖြစ်နိူင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။
သို့သော်၊ ရရှိသောဒီဂရီသို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုဘယ်သောအခါမျှဖယ်ရှား။ မရပါ။ ၎င်းသည်တစ် ဦး ချင်း၏အောင်မြင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီအားဤပံ့ပိုးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမပြောနိုင်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးစားမည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သိပါ။
သင်၏ Hodges တက္ကသိုလ်အသင်းကိုမျှဝေရန် (သို့) သင် Hodges တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအားသင်ကူညီနိုင်သည့်နည်းလမ်းများအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ တက္ကသိုလ်တိုးတက်မှုဒါရိုက်တာ Angie Manley၊ 239.938.7728 OR အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ amanley2@hodges.edu.
ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါ link ကိုနှိပ်ပါ။